Trafic mansoon:Somali badan oo lacagtoodee ku waayey website been abuur ah * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated Sep 3, 2016
Charles scovile oo ah nin American ah ayaa wuxuu keenay fikrad lacag lagu sameeysan karo adigoon wax howl ah aan qaban. Waxaa ku shubi bankigiga Campaniga loo yaqaano Trafic mansoon .Halkii sahmi ama share wuxuu joogo $50 doolar. Waxaa helaysaa $5 dollarkii halkii sahmi.Hadii aad gadato 50 sahmi waxaad helee $ .Waxaa intaa ka sii wanaagsan hadii aad keento qof waxaad leedahy inta qoftaa faaiido oo kale. Waxaan wareeysi la yeelanay nin soomali maraykan ah oo ku dartay bogaan traffic monsoon$80000 oo Dollar .Ninkaan magaciisa noogo sheegay Hassan burale wuxuu aaminsanaa in uu campanigaani mid saxaa yahey,Hasa yeeshee waxaa xirey hawadana ka saaray ciidan ilaalad dhaqaalah ee loo yaqaan security exchange Federal police. Dadkii lacagta ku lahaana meel cad ayay soo fadhiisteen:
Fadlan la xiriir cinwaanka hoos ku qoran hadii lacag aad ku leedahay companigaa kor ku xusan
Traffic Monsoon Receivership
In re: Traffic Monsoon, LLC, a Utah Limited Liability Company, and Charles David Scoville, an individual
Case number: 2:16-cv-00832-DB
Peggy Hunt, Esq.
Traffic Monsoon Receiver
136 South Main Street, Suite 1000
Salt Lake City, UT 84101-1685
Traffic Monsoon Receivership Hotline
Toll-free in North America 888-522-8926 or outside of North America +1-503-520-4483
Traffic Monsoon Receivership Email